Desperate Zimbabweans use cell phone transfers to get cash | News | Bastille Post
Published at 17:18 on 25 August 2019 Updated: 17:20
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a client collects coins he bought from a vendor at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, vendors are seen on their mobile phones while selling cash at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a vendor transacts on his mobile phone while selling cash in Harare Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a vendor is seen on his mobile phone while selling cash at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)